Ividiyo: Intlalontle xa kuthelekiswa nokuKhangela okuKhanyayo | Martech Zone
Ndiyacinga Intengiso ye-MDG bezama ukwenza abanye bethu baphose i-gasket xa sifunda isihloko sale vidiyo ye-infographic bayidibanisa, I-Social vs Search Smackdown: Idabi lokuThengisa nge-Intanethi. Kodwa, yeha, babuyela ezingqondweni zabo ngokuphela kwevidiyo.
Ukuqala kwethu iarhente, ishishini laligcwele ziiarhente ezikhethekileyo. Ngapha koko, isiluleko sokuqala endasifumana kumnini-arhente yayikukugxininisa. Oko bekuchasene ngqo nesona sizathu sokuba ndiqale DK New Media -Ngokuba wonke umntu wayesilwa uhlahlo-lwabiwo mali lomnye kwaye kungekho mntu ujonge umthengi. I-CMO enikiweyo yayifaka iifowuni ezivela kubathengisi be-imeyile, abathengisi be-SEO, abathengisi beMidiya yezeNtlalontle… singasathethi ke ngokuthengisa ngokwesiko. Kwaye bonke beza nezibalo kwitafile yokuxhasa ukuba kutheni kufuneka uchithe ixesha elininzi kunye nabo.
Izicwangciso zokuthengisa zedijithali ezisebenza kakuhle azikho Ukuqobisana, bonke kufuneka basebenze kunye. Abathumeli be-imeyile ababuyayo kunye nokuzibandakanya ngokwasentlalweni, amajelo eendaba ezentlalo avelisa incoko kwi-Intanethi evelisa iziqendu kunye ne-backlinks, ethi yona iphucule umgangatho wakho. Ke inqanaba lakho kumagama aphambili afanelekileyo afika phambi kwabantu abaphandayo kwaye bakulungele ukuthenga. Umbuzo awufanelanga usebenzise owuphi, kodwa kufuneka ujonge njani kwaye usebenzise njani nganye.
Uphantse wandifumana MDG! Umsebenzi omhle.
tags: mdgmdg intengisomdgokwazisaUphando lwezoPhandokhangela xa kuthelekiswa nentlaloukuthengisa kwezentlaloSocial Media Marketing
Iindlela zokuThengisa iziQulatho ze-B2013B zango-2
Sep 11, 2013 kwi-4: 30 AM
Njenge-pseudo SEO / SEM yokuqalwa kwe-boutique eqinile, ndifuna ukuphakamisa zombini. Intlalontle kunye noPhando zibandakanya, ke ndiyavuma ukuba kufanele ukuba zihambisane ekwenzeni isicwangciso esiliqili sokuthengisa.